Masuuliyiinta Kaalinka 5aad oo Daw u Yeeshay Dumaasha ONLF – Rasaasa News
Sep 26, 2009 Jwxo-shiil, Kaalinka 5aad
Is aragyo hoose oo u dhaxeeya wakiilada Tigray iyo kooxda Jwxo-shiil oo ka bilowday dalalka reer galbeed, wadahadalaas oo ay adag tahay in ay dadweynuhu ogaadaan ayaa waxaa wada dad ka tirsan maamulka kaalinka 5aad oo degan dalalka reer galbeedka, xidhiidhku waa telefoon kaliya ee ma jiro is arag.
Wararka ka imanay Kaalinka 5aad, ayaa sheegaya in mar labaad ay gaalaabixidoonaan masuuliyiinta ugu saraysa Kaalinka 5aad dalalka reer galbeedka, gaar ahaana Waqooyiga Maraykanka.
Bilowgii bishii ina dhaaftay ayey ahayd kolkii ay qaar ka mid ah Kaalinka 5aad ay cagta mariyeen dalalka Yurub, socdaalkaas oo keenay in xabsiyada laga siidaayo dad maxaabiis ahaa oo ay tiradoodu kor u dhaaftay 200 oo ruux.
Dadka maxaabiista ah ee la siidaayey ayaan wax dambi ah oo ay galeen uusan jirin, balse loo haystay uun cudhaadh, kolkii la hubsaday in ayna jirin wax khatar ah oo ka dambaysa siidayntooda ayaa waxaa ooda ka qaaday Cabdi Iley.
Socdaalka Da,uud uu ugu soo duulayo Waqooyiga Maraykanka ayaa iyada laftigood waxaa ay calaamad u tahay hubsasho la hubsaday in ayna jirin khatar kaga iman karta Masuuliyiinta Kaalinka 5aad.
Muddo ka yar sanad waxaa aad u adkayd in masuuliyiinta Kaalinka 5aad ay isku soo biimeeyaan, waxaana ka dhici jiray dalalka reer galbeed shirar joogta iyo ololeyaal ka dhan ah, xukuumada Tigray iyo kuwa la shaqeeya. Hadaba waxaa la isweydiin karaa maxaa kalifay in ay ku soo dhiiradaan masuuliyiinta Kaalinka 5aad dalalka reer galbeed, waxaan filayaa in ay tahay labo arimood oo ah 1] dilkii Dr. Maxamed Siraad Dolal 2] heshiis hoose oo u dhaxeeya Jwxo-shiil iyo Itobiya.
1] Dr. Maxamed Dolal waxaa uu ahaa aas aasayaalkii ururka, waxaa uu ahaa ninka keenay in ay ONLF ka hir gasho dalalka reer galbeedka, waxaa uu ahaa nin aqoon dheer oo afkaar adag, oo aan marna aaminsanayn in Itobiya, gaar ahaan xukuumada Tigray ayna ummada Somalida Ogadeeniya si nabad ah xaqooda uga heli karin in ay ka go,aan mooyee. Dr. Dolal waxaa uu ahaa ninka ay xukuumada Tigray ugu doon doonka badnayd si ay ula gaadho heshiis, laakiin Dolal waligii kuma fikirin heshiisa gaar ah oo dhex mara Ogaden iyo Itobiya kaliya, balse waxaa uu ogolaa heshiis caalami ah.
2] Waxaa jiray xubno ka tirsan ururka ONLF oo uu ugu weyn yahay Jwxo-shiil, oo aan iyagu waligood aaminin in Ogaden ay kaligeed istaagto, balse ay noqon karo meel leh maamul hoosaad ka gadaalna dalban karta xoriyad kolka ay maamulka bartaan. Waxaa muddo dheer lagu xamanayey in uu Jwxo-shiil iyo Itobiya uu xidhiidh hoose ka dhaxeeyo, laakiin ay la,a yihiin sifihii lagu hir galin lahaa heshiiskaas.
Hadaba, arimahan cusub ee ay hada bilaabeen maamulka Kaalinka 5aad ka dib dilkii Dr. Dolal iyo wailba hadalada uu Maadeey kaga dhawaaqay kulan ka dhacay Colorado ayaa waxay astaamo cad cad u yihiin heshiis uu Jwxo-shiil doonayo in uu ku soo af jaro xabadii socotay 20kii sano ee la soo dhaafay. Masuuliyiinta Kaalinka 5aad-na waxay sahan u yihiin in ay u gogol xaadhaan arimaha u dhaxeeya Jwxo-shiil iyo Itobiya oo la helo sabab lagu qanciyo dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee jooga dibadaha.